Kaominina Mangabe – Faritra Betsiboka : miverina ary hifantoka amin’ny fambolena ny orinasa Somia | NewsMada
Kaominina Mangabe – Faritra Betsiboka : miverina ary hifantoka amin’ny fambolena ny orinasa Somia
Vonona hiverina amin’ny asa fampandrosoana ny fambolena ny orinasa Somia (Société malgache d’industrie agricole) ao anatin’ny Groupe Akesson. Tetikasa iray lehibe ataon’io orinasa io ny voly vary any amin’ny kaominina Mangabe, distrikan’i Maevatanana, faritra Betsiboka. Natomboka ny 19 desambra teo ny tetikasa.
Noho ny krizy politika mateti-pitranga eto amin’ny firenena, nihemotra amin’ny asa fanaony mivantana ny orinasa Somia ka nampanofa ny taniny. Talohan’izany, tamin’ny Repoblika faharoa, noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fitantanana (nationalisation) ireny orinasa tsy miankina an’ny vahiny ireny. Iaraha-mahafantatra anefa fa potika tanteraka ireny orinasa ireny ary betsaka ny tsy tafarina. Koa miverina ny orinasa Somia, hifantoka amin’ny fambolena hiadiana amin’ny fahantrana. Tany an-toerana, tamin’ny fanombohana ny tetikasa, ny lehiben’ny faritra Betsiboka, Razafipiera Herimalala, sy ireo mpiara-miasa aminy ; ny PDG-n’ny Groupe Akesson, Karl Akesson, sy ireo mpiara-miasa aminy.
Manohana ny fiverenan’io orinasa io ny mponina any amin’ny kaominina Mangabe. Vonona rahateo koa ny orinasa amin’ny fiaraha-miasa amin’izy ireo. “Ny zava-misy aloha izao, 327 ha ny azo volena ao Mangabe, raha nisy 500 ha izany tany aloha ; any Ambinanikely, misy 587 ha azo volena. Baiboho avokoa ireo, mety hahazoam-bokatra 5 t /ha, araka ny ezaka izay hatao”, hoy ny teknisianina iray momba ny fambolena, Raminosoa Samuël. Ezaka hoentin’ny orinasa ny fampitaovana sy fanofanana ireo tantsaha miara-miasa aminy. “Manantena izahay hamerina ny voka-bary ho tsara kalitao sy ho betsaka. Aorian’ny fotoam-pambolena asara, hatomboka indray amin’ny volana mey ny voly tsaramaso, lojy, voanjobory”, hoy ihany Raminosoa Samuël.
Tetikasa hafa ankoatra ny fambolena
Ankoatra ny fanomezana asa ny mponina any an-toerana, maro ireo tetikasa nofaritan’ny Somia : famatsiana rano fisotro madio ; fiarovana ny nofon-tany vokatry ny fifandonan’Ikopa sy i Betsiboka ; manampy amin’ny fanamboaran-dalana 52 km, miala avy eo amin’ny RN 4, izay manampy betsaka ireo tantsaha sy ireo mpanangom-bokatra ; famatsiana herinaratra ao amin’ny kaominina Mangabe. Asa efa natomboky ny orinasa ny fanampiana amin’ny fanamboarana CEG any an-toerana.